Xiisad dagaal oo ka taagan deggaano ka tirsan Galmudug | KEYDMEDIA ENGLISH
Xiisad dagaal ayaa saaka ka taagan, deggaano ka tirsan gobolka Galgaduud, kadib dil xalay ka dhacay tuullo hoos-tagta degmada Caabudwaaq.
CAABUDWAAQ- Soomaaliya - Waxaa maanta deggaano ka tirsan gobolka Galgaduud laga dareemayaa, xiisad ka dhalatay dil xalay tuullada Dalsan ee hoos-tagta degmada Caabudwaaq, loogu gaystay Nin ka mid ah dadka xoola dhaqatada ee deggan halkaasi.
Dilkan ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu la xiriira aanno Qabiil. Ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Gureey Cabdi Inkir, wuxuuna ka mid ahaa dadka xoola dhaqatada ee ku degganaa tuullada Dalsan.
Qof kamid ah dadka deggaanka, oo KEYDMEDIA ONLINE ay la xiriirtay, ayaa inoo xaqiijiyey in dilka ay fuliyeen 4 Nin, kuwaas oo ku hubeysnaa qoryaha AK47, waxaana dilka ka dib ay ka baxsadeen, halka uu falku ka dhacay.
Dilkan oo ah mid aanno Qabiil ah, ayaa sida la sheegay daba jooga, dilal dhowr ah oo sanadihii ugu danbeeyey ka dhacayey, tuullada ninka lagu dilay iyo kuwa ka agdhaw.
Waxaa saaka halkii xalay marxuumka lagu dilay, soo buux dhaafiyey rag hubeysan, oo sida la tilmaamay ku heyb ah, kuwaa oo doonaya in ay weerar ku qaadaan beesha ay ka soo jeedeen, kuwii dilka gaystay.
Xiisada ayaa ah mid horseedi karta dagaal beeleed hor leh, waxaana lagu soo waramayaa in hub urrursi ay ku jiraan, labada beel ee ay xiisadani ka dhex aloosan tahay, mana jirto cid wada waan waan lagu dejinayo xaaladda.
Tan iyo markii uu Qoor-Qoor, gacanta ku dhigay, hoggaanka maamulka Galmudug, waxaa kordhay dilalka la xiriira aannooyinka qabiil, iyo dagaal beeleedyada, ka dhacaya deggaanada uu maamulka Galmudug ka arrimiyo, waana arrin si dhab ah u iftiimineysa fashilka xooggan ee hareysay taladiisa, oo iminka ku soo ururtay fulinta qorshayaasha, ay u soo jeediyaan, keligii taliye Farmaajo Iyo eeddeysane Fahad Yaasiin.